Somaliland: Nuxurka Su’aalo Ku Saabsan Dekeda Berbera Iyo Saldhiga Imaaraadka Carabta Oo Machad London Ku Yaala Lagu Waydiiyey Wasiirka Arrimaha Dibada Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Nuxurka Su’aalo Ku Saabsan Dekeda Berbera Iyo Saldhiga Imaaraadka Carabta Oo...
Khamiistii 20-kii Bishii hore ee Aprill wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire waxa uu machadka Africa Reseach Institute ee xaruntiisu tahay magaalada London ka jeediyey khudbad ku saabsan Jamhuuriyaddda Somaliland.
Markii uu khudbadiisa oo dhinacyo badnayd dhameeyey waxa dadkii kulanka ka qayb galey oo ajaanib ku jireen waydiiyeen su’aalo kala duwan oo ku saabsan Dekeda magaalada Berbera iyo Saldhiga Imaaraadka Carabta laga siiyey Berbera iyo qodobo kale,Haddaba Machadka ayaa bogiisa hore ee Internet-ka ku baahiyey su’aalihii ugu xiisaha badnaa ee madashaas lagu waydiiyo wasiir Sacad Cali Shire kuwaas oo uu Geeska Africa qaar kamid ah usoo turjumay Afsomali,waxaana su’aalaha iyo jawaabaha Wasiir Sacad Cali Shire u dhaceen sida tan.
Suaal:- Marka aynu ka hadlayno heshiiska DP WORLD ee dekeda magaalada Berbera iyo Saldhiga Milateri ee laga kireeyey Imaaraadka ma la odhan karaa aqoonsi la’aanta Somaliland ayaa xukuumaddii ku qasbaysa inay dalkii dhaxal wareejiso?
Jawaab:- Annagu runtii sidaas uma aragno waxa aanu u aragnaa in dhaxalkii dalka aanu wax kusoo kordhinayno
Su’aal:- Maxaa damaanad ah ee ay xukuumaddu ka haysataa in aan saldhigaasi Milateri ee Imaaraadka laga kireeyey loo isticmaali doonin colaad tusaale ahaan hawlgallada Yamen?
Jawaab:-Saldhiga Milateri waa saldhig Milateri waa aan ka garaabayaa in uu jiro karo walaac dhinaca sharciyada ahi,laakiin saldhigyo kaleba waa ay ku yaalaan gobolka,waxaa kamid ah saldhiga Milateri ee Jabuuti ku yaalla,ama saldhiga uu Imaaraadku ku leeyahay magaalada Casab ee dalka Eriteriya.maan maqal wax raad taban ah oo ay saldhigyadaasi ku yeesheen dalalka Marti galiyey.
Su’aal:-Dawladu ma waxay isku dayaysaa in ay aamusiiso cid kaste oo dood ka keenta ama ka soo horjeesata shirkada Dp World iyo heshiiska Saldhiga Milateri.?
Jawaab:- marnaba ma jirto sabab cid loo cabudhin karaa.waa xaqiiq marka aad wada xaajood heshiis ku jirto in aanad waxii laga wada xaajooday oo dhan dadwaynaha u sheegi Karin.Waa muhiim in lala yimaado daah furnaan iyo wada tashi laakiin sidaas oo kale waxa iyaduna muhiim ah in si heshiis fiican loo helo ay qodobada qaar sir ahaadaan,waana sida dal kaste oo dunida ahiba yeeli lahaa.labadan heshiisba Baarlamaanku waa ansixiyey.
Su’aal:-Dawlada Muqdisho ma waxay isku dayaysaa in ay carqaladayso heshiiska Dp World iyo saldhiga Milateri ee Imaaraadka laga kiraynayo?
Jawaab:-dawlada Somaliya wax awood ah kuma laha Somaliland Berberina ma khuseyso ,heshiisyadana shaqadeeda maaha,kuwa aanu la saxeexanay heshiisyadanina si fiican ayaa ay u ogyihiin sida ay xaaladu tahay,sida Qaran ayaa ay Somaliland arrintan ugala xaajootay waana ay ka badheedheen hawsha.
Su’aal:-Markii aad Imaaraadka wada xaajoodka arrintan khuseeya kula jirteen ma waydiisateen in ay si rasmi ah idiin aqoonsadaan?
Jawaab:-Waan kuu xaqiijinayaa in aanu waydiisanay.cid kaste oo aan wada xaajood la galnana waa aanu waydiisanaa.Laakiin marka aad wada xaajoodka ku jirto qasab maaha in wax kaste oo aad doonayso aad hesho intii karaan ah ayaad shuruudaha riixaysaa uun.